Posted by ခိုင်နုငယ် at 8:37 PM
ဒါတကယ့်လောကမှာ ဖြစ်ပျက်နေမှုတွေ ထင်ဟပ်နေတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပဲ.... ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသရောက်ရောက် ဥာဏ်ကိုချွန်းကဲ့သို့ အုပ်ထားသင့်တယ်နော်..... ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမကောင်းဘူး...( တကယ့်အဖြစ်လို့ပဲ ထင်ထားတာကြောင့် ပိုဆိုးတယ်)
ငှက်တိုင်းရဲ့ အိမ်အပြန်ဟာ လှပသင့်ပါတယ်..လှပနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်..
ဘယ်ကမှန်း ဘယ်သူမှန်းမသိဘဲနဲ့ ဘ၀ကို ပုံအပ်ရလောက်အောင် အသိဥာဏ်နည်းတဲ့ မိန်းခလေးကိုတော့ တကယ်ကို အံ့သြမိပါတယ်။ အချစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်လာရင် မိန်းခလေးတွေ စိတ်ဓါတ်ပျော့လွန်းအားကြီးတယ်။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေကြမှပေါ့။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ။ သင်းကွဲငှက်ကလေးတွေ အနာအဆာမဲ့စွာ မိသားစုနှင့်ပြန်ဆုံနိုင်ကြပါစေလို့ဘဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ခိုင်နုငယ် ရေ...ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ဝတ္ထု တစ်ပုဒ် လို့ပဲ
သဘောထားပြီး ဖတ်လိုက်ပါတယ်။အပြင်က ဖြစ်ရပ်မှန်
တွေ မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ဒီမှာလည်း တစ်ယောက်စ၊နှစ်
ယောက်စ ဒါမျိုးတွေ ကြား၇တယ်။ပိုဆိုးတာက မသိတာ
သင်းကွဲဌက်တွေ သူတို့ မိသားစုတွေနဲ့ အမြန်
ဆုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆုံစည်းကြပါစေဗျာ။
ဇာတ်လမ်းလေးဖတ်ပြီး မောသွားရတယ်ဗျာ။ ကျနော်လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ မုန်တိုင်းဒဏ်မှ ကင်းဝေးနိုင်ပါစေလို့....
ဒီလိုပါပဲလေ. . .
ဒီလို ဖုန်းဆက်နေသူတွေကို အံ့သြမိပါရဲ့။
မတော်လို့များ ကိုဇော်တို့ ဖုန်းကိုများ မဆက်လေနှင့်။
ပြီးတော့ ပြန်ခေါ်ပါ ကိုဇော် လို့ မလုပ်မိစေနှင့်။
ကိုဇော်တို့ ဖုန်းကဒ်က အမြဲသေနေတာ.......
ကိုယ့်အိမ်တောင်မှ ကိုယ် မခေါ်တာ သူတို့ဆို ဝေးးးးးးး
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မိန်းကလေးခြင်း စာနာမိလို့ ပါပဲ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားသင့်တာ အမှန်ပါပဲ ..
ဒီလိုနိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာမိန်းခလေးတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှ မထိန်းသိမ်းရင် တကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူး...ကိုယ်ချင်းစာမိသလို စိတ်မကောင်းလဲ ဖြစ်ရပါတယ်...
သင်းကွဲဌက်ကလေးတွေ ချောချောမောမော ဘေးမသီရန်မခ အသိုက်အိမ်ကို ပြန်ရောက်နိုင်ပါစေနော်..။
ဇာတ်လမ်းထဲက မြင့်မြင့်သီ.. အတွေးအခေါ်ရင့်ကျက် လူကြီးဆန်တယ်နော်။ သဘောကျတယ်..
စာရေးကောင်းလိုက်တာ.... ဒါမျိုးတွေ နောက်ပိုင်း ပိုများလာသလိုပါပဲ.... မိန်းကလေးတွေ မိဘဆွေမျိုးနဲ့ ကွဲကွာနေတဲ့အခါ ထင်ရှာမလုပ်မိကြဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းသိန်းနိုင်ဖို့က အရေးကြီးတယ်နော်....
ဟုတ်ပ ညီမ ရယ် ဒါမျိုးတွေကြားဘူးတယ် မိုက်လိုက်တာနော်
ပျံသန်းဖို့က ငှက်တို့၏တာဝန်ပါ ... လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ဆိုတာ အခြေအနေအများကြီးပေါ် မူတည်မှာပါ။ သင့်/မသင့် ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း ပညာ လိုပါလိမ့်မယ် ။ထင်တာပါ။
ဒီလိုအဖြစ်တွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းစေချင်မိတယ်..
စာရေးလဲကောင်းသူဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းကလေးက တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းစရာ
တကယ့်အဖြစ်အပျက် မဟုတ်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းမိတယ်..
( ပျံသန်းဖို့က ငှက်တို့၏တာဝန်ပါ ... လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ဆိုတာ အခြေအနေအများကြီးပေါ် မူတည်မှာပါ။ သင့်/မသင့် ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း ပညာ လိုပါလိမ့်မယ် ။ထင်တာပါ။
ငြိမ်းစိုးဦး) အဲ့ဒီကောမန့်ကို သဘောကျတယ်ဗျ ...
ခုထိ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ယိုင်ထိုးပျံသန်းတုန်း
၀တ္ထုလို ကျွန်တော်ခုထိကို မရေးတတ်သေးဘူး ညီမလေးကရေးတတ်တယ် ...
မမ ... မမရဲ့ သင်းကွဲငှက်ကို အရမ်းကြိုက်လို့ မူရင်းအတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တယ်။ ခွင့်မတောင်းဘဲ လုပ်လိုက်လို့ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။ အရမ်းကောင်းတယ် ညလေးမှာ အဲ့လိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိနေတာ သူ့ကိုပြောလိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ကို နင်က မနာလိုနေလို့လားဆိုတဲ့ အတွေးတွေဖြစ်သွားမှာကို မကြိုက်လို့။ ခုမမ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း စာရေးဆရာမလည်း နာမည်ကြီးသွားအောင် ဝေမျှပေးလိုက်တယ်နော် ဟီးးးး နောက်မှတွေ့မယ်နော် မမ
တကယ်ကိုဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ပိုစ့်လေးပါ။ အပြင်မှာလည်း မြင်တွေ့ကြားနေရပါတယ်။ သင်းကွဲငှက်လေးတွေ မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာအတူတကွ ပြန်လည်ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေ....
ရတာ ကောင်းလိုက်တာ။ အိအိထွေးက အနားမှာရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းဆိုရင်တော့
နာမည်တို့ ဘာတို့ကို တိုက်ရိုက်မရေးသင့်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်။သူတစ်ပါး
ထိခိုက်မိမှာစိုးလို့ပါ။ ဒီလိုပြုပြင်ရေး၊ သတိပေးရေး ဆောင်းပါးလေးတွေ ရေးတာကို သဘောကျပါတယ်။ အားလည်းပေးပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်ဖြစ်၊ မောင်ဘချစ် ၀ါကျလေးမှာ (တာ)ဆိုတဲ့စာလုံးလေး ပါရင် ပိုကောင်းမလားလို့။ ဆရာလုပ်တာဟုပ်ဘူးနော်။ ဒီက ခိုင်နုလောက်ကို မရေးတတ်သေးတာ။
မိမိဝန်းကျင်မှာ ရှိနေသေးရင်တော့ နာမည်တွေ
မထည့်သင့်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်။ ပြောင်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ အိုကေပေါ့။
ပြုပြင်ရေး၊ အသိပေး၊ သတိပေးဆောင်းပါးတွေ
ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်။ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မောင်ဘချစ် ၀ါကျေးလးမှာ (ဖြစ်ချင်တာဖြစ်)တာ ဆိုတဲ့စာလုံးလေးထည့်ရင်
ဒီက ခိုင်နုလောက်တောင် ရေးတတ်သေးဘူး။
ခံစားချက်လေးနဲ့ရေးထားတဲ့ သင်းကွဲငှက်လေးက ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။
အိအိထွေးက မိမိဝန်းကျင်းမှာ `ရှိနေသေးရင်တော့ နာမည်ထည့်တာမကောင်းဘူးပေါ့။ နာမည်ပြောင်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ အိုကေ။
ပြုပြင်ရေး၊ အသိပေး၊ သတိပေးဆောင်းပါးလေးတွေရေးတာကောင်းပါတယ်။
ဆရာလုပ်တာဟုပ်ဘူးနော်။ဒီက ခိုင်နုလောက်တောင် ရေးတတ်သေးဘူး။
သင်းကွဲငှက်က ဖတ်ရတာ ရင်မှာထိစေပါတယ်။
အရေးအသားကောင်းတော့ အဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ ပြီးမှ စိတ်မော နေမှန်း သိရတော့တယ်။
အင်း လွတ်လပ်မှုရဲ့အရသာကို လူတိုင်းက အကျိုးရှိရှိ
အသုံးမချနိုင်တော့ အိမ်အပြန် သင်းကွဲငှက်လေးတွေ
ညီမတို့အရွယ်တူတွေ အချင်းချင်းက ပိုသိကြတယ်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက် မို့လား။
မိဘမိသားစုဆွေမျိုးတွေမရှိတော့ ပြောပေးမယ့်သူတွေလည်းမရှိဘူးလေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘေးကင်းကြပါစေလို့ အားလုံးနဲ့ အတူဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ သဘာဝတွေပါပဲ။ပါရမီ ဆယ်ပါးမှာ ဥပေက္ခာ ပါရမီ က ကျွန်တော်တို့ အတွက် ခက်ခဲလွန်းတော့ ဒီလိုမျိုးတွေ ကြုံရကြား ရရင် စိတ်မခိုင်ဘူး။ ပြည်ပရောက်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေထဲမှာ အိအိထွေးတွေ ထပ်မပေါ်လာပါစေနဲ့တော့ ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းကို ကျွန်တော်တို့ အကြိမ်ကြိမ် ရွတ်ဆိုရမှာ။
အပြင်မှာသာ တစ်ကယ်ဆိုရင် အဲဒီဇာတ်ကနာလွန်းတယ်။ abortion လုပ်ရတဲ့ အခြေအနေထိ ဖြစ်လာရတာ အိအိထွေးကိုက တုံးလွန်းတယ်။ တရားဝင် လင်ယောင်္ကျား နဲ့ ဆိုရင်တောင် သူများနိုင်ငံမှာ စာချုပ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆိုတာ ဖြစ်လာလို့မှမရ တဲ့ကိစ္စကြီးကို။
“စေတနာတွေပုလင်းကွဲလောက်တောင်အရောင်ပြန်မဟပ်ခဲ့ ” တဲ့ အလင်္ကာလေးက လှတယ်ဗျာ။
တစ်ခါတစ်ရံမှမဟုတ်ပါဘူး စာရိုက်တဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ လည်း အမြဲလိုလို မှားတတ်ပါတယ်။
. . . အိပ်ယာကနိုးမှရေချိုး၊ဘုရားရှင်ခိုးပြီး။ကြက်ဥလေးတစ်လုံးကြော် . . . . ဆိုတာကြီး ကတော့ ပြင်လိုက်ပါဦးဗျာ
ဘာသာခြားတွေ မြင်လို့မကောင်းဘူး။(စေတနာ အရင်းခံနဲ့ ပြောတာမို့ စိတ်တော့ဖြင့် မရှိ စေချင်ပါ)
သူများတွေမန့်သွားတာလည်းကြိုက်တယ် ကျွန်တော်ကတော့ လက်မထောင်ပြသွားတယ်း)
ဖတ်ဖူးတယ် မမန့်ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်မယ် ...
တကယ်တော့ဗျာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းနိုင်ဖို့က အဓိကပါပဲ ....
အရာရာကို ပေါ့ပေါ့ထားတတ်သူတွေ အတွက် ရလဒ်က ဘယ်ကောင်းလိမ့်မလဲ ...။
အဲလို ယောက်ကျားမျိုးတွေလည်း ရှိနေတဲ့ အတွက် ခက်တယ်ဗျာ ..
ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ ကြားရရင် တကယ်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုး အချင်းချင်း စည်းမစောင့်တဲ့ လူတွေကိုလဲ ရှုပ်ချတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် အဲဒီကောင်မလေးကိုတော့ မသနားမိဘူး။
နိုင်ငံရပ်ခြားထိရောက်အောင်လာပြီးမှ ပင်လယ်ထဲမှာ ရေခန်းသွားတယ်ဆိုတာကို ယုံသကိုး။ နှမချင်းမစာနာ ပြောသည်လည်းမဟုတ်ပါ။ ဘယ်သူမပြုမိမိ မှုပါ။
သေတစ်ပန်သက်တစ်ဆုံးပေါင်းသွားကြသည့် စုံတွေတွေလည်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုထိတော့ မမြင်မိသေးဘူး။ ကျွန်တော် မျက်စိမပွင့် နားပိတ် တာ ဖြစ်နိုင်သလို ငါးနှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်လေးက နည်းသေးလို့ ဖြစ်မှာပါ။ 3748 ယောက်သော မိန်းကလေးတွေကတော့ အဲလို မျိုးတွေ အဲလောက်မဆိုးတာတွေ ဖြစ်နေကြတာ စိတ်မကောင်းတော့ ဖြစ်မိသား။ ကိုကြီးဇော် ပြောသလိုပဲ ဖုန်းနံပါတ်တော့ လာမပေးနဲ့ ခေါ်ဝူး။
LIKE တစ်လုံးပဲ Comment ပေးခဲ့တော့မယ်နော်။
အကြောင်းအရာရွေးချယ်မှု၊ အရေးအသားပြေပြစ်ချောမွေ့ မှု၊ အသိပညာတစ်ခုခုပေးနိုင်မှု ဆိုတဲ့ စံတွေ မီတဲ့ ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်လို့ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ကြိုးစားပါ။ အားပေးပါတယ်။
K Aung Soe said...
စာအရေးအသား အရမ်းကောင်းပါတယ် တစ်နေ့မှာ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်စွာ မျှော်လင့်မိပါတယ် ... ။
သင်းကွဲ ဆိုပြီး ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ရေးထားဖူး
သေးတယ် ။ ဒီ Essay လေးက ပေးချင်တဲ့
Message မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ... ။ Title
ဖတ်ရင်း ထုံးစံအတိုင်း မဆိုင်တာတွေ
လျှောက်တွေးမိလို့ ... :)